Indlela yokuhlanza i-mattress ekhaya?
Isici esibalulekile sokulala komuntu okuphelele futhi okunempilo ngumamitha ovamile, okungeziwe, ngaphandle kwesakhiwo esihlanganisiwe kahle, kumele agcinwe ehlanzekile futhi hhayi umthombo wamagciwane amaningi. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthatha njengendlela yokuziphatha ukuhlanza nokuhlanza njalo. Indlela yokuhlanza i-mattress ekhaya?
Izindlela zokuhlanza i-mattress
Indlela yokuhlanza i-mattress ngokushesha nangempumelelo? Kunezinketho eziningana zokuhlanza ezingasindisa umkhiqizo kusukela ekubukeni kokungcola kanye namacwecwe.
Ukubeka izinsizakalo zakhe zokuhlanza ezomile. Le ndlela iyindlela elula, kodwa ebiza kakhulu, ngakho akuwona wonke umuntu okwazi ukuyikhokhela.
Yenza ukuhlanza okumile nge-vacuum cleaner. Ngesihlungi esihlanzekile nesikhwama sesothuli, idivayisi izokwazi amandla futhi idwebe ngokungafani ukuthungula okuncane nomkhiqizo omkhiqizo.
Ukuhlanzwa okumanzi. Lokhu kusebenza kungenziwa ngezindlela ezimbili: ukusebenzisa i-vacuum cleaner futhi ngesandla. Indlela yokuqala yindlela enhlanzekile kunazo zonke kusukela ekubukeni kokusebenza kahle, ngoba ihlanza uthuli, ukungcola okuhle kanye nezibungu ezingaphakathi komkhiqizo, hhayi kuphela emkhathini. Ngokuzenzakalelayo, i-mattress kufanele ihlanjwe ngesisombululo esincane sokuhlanza, sula ngendwangu emanzi bese usomile kahle emoyeni omusha.
Ukuhlanza ekhaya ngokuphumelelayo kusho ifenisha nemikhumbi, okufanele ifakwe ebusweni bomuntu olele, uhambe isikhathi esifushane, bese ugeza ngendwangu emanzi noma i-vacuum. Umkhiqizo kumele usomiswe.
Ukuhlanza ngokuvamile umthamo kuhloswe ekuqedeni imikhaza kanye namagciwane, kanye nokuletha indawo yokulala ibe isimo esihle. Kodwa-ke, ngokuvamile kwimikhiqizo kunamabala adinga izindlela ezikhethekile zokudlula: igazi, umchamo, ikhofi, iwayini nabanye. Indlela yokuhlanza i-mattress kusuka emathini?
Ukususwa kwamabala omchamo
Ungakwazi ukuhlanza i-mattress emcinini ekhaya usebenzisa i-borax (i-tetraborate ye-sodium), i-disinfactant yendawo yonke esetshenziselwa ukwenziwa kwe-detergents. Ngenxa yalokhu, kuyadingeka ukuba uhambise kancane umuthi, ukuze unciphise ukuhlushwa kwayo futhi alulaze iphunga. Khona-ke indawo yenkinga ifafazwe ngosundu futhi ihlutshiwe kahle. Vumela ubuso ukuba bome. Ukusheshisa inqubo yokomisa ngokubeka umthamo ngaphansi kwemisebe yelanga noma endaweni enomoya omuhle. Khona-ke i-powder kufanele iqoqwe ngumuntu ohlanzekile. Umbala awukwazi ukususwa ngokuphelele, kodwa ukukhanya kwawo kuzokwehla kakhulu, futhi iphunga elimnandi liyophela.
Indlela yokuhlanza i-mattress kusuka kumchamo? Ephumelelayo nokususwa kwamabala omchamo, insipho ngamanzi iyasebenza. Ngale ndlela ungasusa ama-formations amasha, ngenkathi uzama ukuvimbela umswakama ukungena kumatitha. Ubuso obunamanzi kufanele bufakwe isiponji (noma ithawula) kuze kube yilapho iphunga libuthakathaka. Qinisekisa umphumela ngokungeza utshwala noma uviniga kwisisombululo. Ibala kufanele livunyelwe ukuba lome ngokuphelele. Sheshisa lesi senzo ngesomisi sezinwele.
Indlela yokuhlanza umatizi wengane kusuka kumchamo? Indawo entsha yomchamo ingasuswa ngenhlanganisela yamanzi kalamula, ihlanganiswe nosawoti. Izithako zidinga ukuhlanganiswa nesimo esifana ne-gruel. Ingxube etholakalayo idinga ukubhoboza indawo yenkinga, isishiye amahora angu-1-2. Izinsalela ze-ejenti yokuhlanza kumele ziqoqwe ngokucophelela nge-sponge emanzi.
Indlela yokuhlanza i-mattress kusuka emahlazini egazi
Ama-stains amasha wegazi anganqotshwa kalula ngosizo lwamanzi ajwayelekile ahlanzekile, okumele asule ngokushesha. Khona-ke kufanele usebenzise indwangu ebomvu efakwe kwisisombululo esibandayo sosipho, esizogeza igazi kuze kube sekupheleni.
Ama-stain age-age asebekhulile angasuswa ngokunamathisela kusuka kasawoti, i-hydrogen peroxide nesitashi, ehlangene ngenani elinganayo. Ukwakhiwa kufanele kusetshenziswe kudoti, kuvunyelwe ukuba lume, bese kukhishwa izinsalela zenhlanganisela ematithini. Uma umphumela unganelisi, lolu msebenzi luzodingeka lwenziwe izikhathi eziningana.
Ungasebenzisa futhi insipho yasendlini, ene-toothbrush ehlanza kahle ukusilaphaza okukhona, hlansa ngamanzi amancane, bese usula umswakama ngendwangu eyomile.
Susa amabala egazi ematithini ngokusebenzisa isisombululo sikasawoti noma soda. Ku-atomizer kuyadingeka ukuthi uqoqe amanzi, engeza isipuni sikasawoti (noma soda), gubha kahle ibhodlela uphinde uphese isixazululo esiholela ematithini. Ngemuva kwesigamu sehora, le ndawo inconywa ukuthi ibombe ngendwangu eyomile.
Ukusetshenziswa kwama-chemical agents
Ikhambi eliphumelelayo ngokumelene nezindawo ezomile kancane yi-hydrogen peroxide. Ukulungiswa kuyadingeka ngesamba esincane sokuthululela endaweni engcolile futhi, ngenkathi izoba foam, uqoqe isikhunta se-sponge.
Indlela yokuhlanza kahle i-mattress futhi ngokuqinisekile? Uma lezi zindlela ezingenhla azizange ziholele emkhakheni olindelekile, ungasebenzisa isilinganiso esikhulu - i-bleach. Amakhemikhali kufanele athathwe ngamanani amancane futhi ngokushesha ngemva kokufaka isicelo, geza umatimba ngendwangu emanzi. Khona-ke kufanele kume kahle.
Iresiphi yesisombululo sendawo yonke
Ngezinye izikhathi kunamabala, isimo semfundo kunzima ukunquma. Kulesi simo, kunconywa ukusebenzisa isixazululo jikelele esine 250 ml peroxide, 3 tbsp. Iziphuzo ze-soda, i-drop 1 yensipho yesandla noma isitsha sokugeza. Ingxube ehlanganisiwe kufanele ixutshwe ebhodleleni nge-spray futhi isetshenziswe ngokushesha kwibala. Kungakapheli 5-10 imizuzu unike isikhathi sokuba umuthi usebenze. Ngempela phambi kokungcola kuzoqala ukukhanya nokunyamalala. Ifilimu esele ye-baking soda kufanele isuliwe noma ivuliwe.
Kwakukhona isikhunta: indlela yokuhlanza i-mattress
Uma uthola izindawo zokubunjwa ezibangela ukuthuthukiswa kwesifo se-asthma, ukwelapha nezinye izifo, kunconywa ukuthi umise umthamo elangeni, futhi ubuso bawo kufanele buphathwe ngesisombululo se-acetic noma se-alcohol. Kungenzeka ukuxuba isopropyl utshwala ngamanzi ngokulinganisela okulinganayo; Ukwakhiwa okutholakala ngokusula lesi sihloko. Njengoba ukugcina kokugcina kunconywa ukusebenzisa noma iyiphi i-disinfectant eyosiza ukuqeda izinsalela zezinhlamvu ze-fungal.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ama-mattress aqukethe i-latex, ikotini noma i-coconut fiber, ngakho-ke esaba kakhulu amanzi. Ngakho-ke, ngenkathi yokuhlanza, akunconywa ukuba umise imikhiqizo kakhulu, ngoba emswakeni ophezulu angakwazi ukuwohloka futhi alahlekelwe ukuma.
Izincomo zokugcina i-mattress zihlanzekile
Kunconywa ukuthi kugcinwe ukuhlanzeka kwe-mattress:
Sebenzisa ikhava yokuzivikela noma ipati yamatitha, okulula kakhulu ukuhlanza nokuhlanza kusuka emathini;
Ukuphindwa kabili ngeviki
Kanye ngenyanga vula umkhiqizo ngaphesheya;
Ukuyihlanza njalo izikhathi ezimbili ngenyanga - lokhu kuzokunciphisa kakhulu inani lomhlabathi othuliwe emkhiqizo;
Uma izinhlayiya nezidakamizwa eziyinkimbinkimbi zivela, zihlanza ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Kubaluleke kakhulu ukuthi ungadli embhedeni (njengoba ungaboni ngothando), ngoba izinsalela zemvuthu ekufikeni ebusweni bomatta zibangele ukuzaliswa kwama-bacterium. Uma ulandela izincomo ezingenhla bese uhlela umbhede omusha nohlanzekile, ukulala kwakho kuyoba namandla futhi kunempilo.
Ukuvikela imibhede yemifino ngezandla zomuntu siqu
I-antenna ye-TV enezandla zabo-isikhala sokukhetha izinto nezinto eziyindalo
Ukusekelwa kweJalimane ye-clematis: sihlobisa isakhiwo ngezandla zethu
I-Potato roll ngamakhowe
Ebusuku ingoma. Yini ebangela snoring?
Ayikho Retreat, Ayikho Surrender! HTC: uhla Smartphones ezintsha
Eye lehla "Sisteyn Balance": yokusetshenziswa
Izingane nebulizer: izici, indawo, ukubuyekezwa
Lights ku Loft: izici, izinhlobo, izinto
Amalungelo empahla: imiqondo eyisisekelo
History Museum (Volgograd) - indawo lapho umlando elichwazayo
Zezinwele amahle elula izinwele naphakathi